5 Nnukwu usoro SEO nke ndi na-egwu egwu nwere ike iji | Martech Zone
Thursday, July 18, 2013 Jayson DeMers
Yabụ na ị bụ onye egwu na-achọ ịme nkwupụta na ntanetị ma ị na-eche echiche ime ka usoro njikarịcha search engine (SEO) rụọ ọrụ maka gị? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, yabụ dụọ gị ọdụ na, ebe enweghị mgbagha anwansi na njikarịcha njin nchọta, ọ gaghị esikwa ike melite ọhụhụ ọchụchọ gị n'ime Google na Bing.
Nke a bụ usoro SEO dị mma maka ndị na-egwu egwu iji melite ọhụhụ njin ọchụchọ.
1. ịde blọgụ
Gingde blọgụ bụ nnukwu ụzọ iji chọpụta site na engines ọchụchọ. Naanị jide n'aka na e debara aha weebụsaịtị gị n'akwụkwọ na isi injin (Google, Yahoo !, na Bing) yabụ na ha maara na ị na-agagharị na saịtị gị ma depụta ihe ị debere.
Mgbe ị na-ede blọgụ, jide n'aka na ị na-eji ọdịnaya juputara na okwu (nke ahụ bụ naanị ihe ngbanwe nke pụtara “jiri isiokwu ugboro ugboro na ọdịnaya gị”). Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị na - ede blọgụ maka bass clarinet, ọ kacha mma iji ahịrịokwu ahụ“ bass clarinet ”na aha ya na oge ole na ole n’ime ya.
2. Jiri Google edemede
Ọ bụrụ n ’ị na - ede blọgụ (yabụ na ị ga - ahụ, lee anya n’elu) gbasara isiokwu metụtara egwu (ngwa ọrụ gị, ụda olu gị dị egwu, ndị ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ ndị otu a ma ama, ndị na - eme ihe egwu, wdg.) Mgbe ahụ ị bụ, na nkọwa, onye edemede Mana ọ dị mkpa ka ị gafee karịa ịbụ onye edemede ma bụrụ onye Google chepụtara.
Iji mee ka nke ahụ mee, ị ga-ebu ụzọ nweta akaụntụ Google+ (ọ dị mma ịsị na ịnwe akaụntụ Google ga-enyere gị aka SEO kwa, n'ihi na Google doro anya na ọ bụ ngwaahịa Google). Na profaịlụ akaụntụ Google gị, ị ga-ahụ ngalaba “Onye ntinye aka” n’okpuru “Njikọ.” Gbalia mejuputara URL na aha webusaiti ebe I na ede (hu na itinye ochicho nke gi).
Ọzọkwa, mgbe ọ bụla ị na-ede edemede, jide n'aka na enwere akara njikọ na nkụnye eji isi mee nke post ahụ na-ezo aka na akaụntụ Google+ gị. N’ụzọ doro anya, ị ga-eji “ID” gị dochie anya “Google ID”.
3. Mee ka ihe onyonyo gi bulie elu
Ohere dị mma na ọdịnaya gị ga-agụnye ihe oyiyi. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, yabụ mgbe ọ bụla ị tinyere ihe oyiyi na ọdịnaya gị, ịkwesịrị ịgụnye nkọwa nke onyonyo ahụ na njirimara "alt". Nke a bụ otu ị si ‘agwa’ ụlọ ọrụ nchọta ihe n’oyiyi; ha amachaghị nke ọma iji ghọta ihe onyonyo niile site na ọdịnaya pixellated. Enwere ike iji isi okwu gị na nkọwa a.
4. Jiri Youtube
Chọrọ ka achọpụta gị n’ebe ndị ọzọ na - abụghị blọọgụ gị, nri? Iji mee ka nke ahụ mee, ịkwesịrị ịmepụta ọdịnaya na ebe ndị ọzọ na-abụghị blọọgụ gị. Youtube bụ nnukwu ebe iji bipụta ọdịnaya vidiyo, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta nzuzu gị na otu ngwa ọrụ.
Ọzọkwa, ịnwere ike itinye vidiyo Youtube gị ozugbo na blọọgụ gị. Nke a nwere ike ime ka ọdịnaya blog gị dịkwuo mma (nke a bụ a nnukwu ihe atụ). Gbalia igbado vidiyo na isi okwu ndi a anyi na-ekwu.
5. Jiri nchịkọta Google
Nchịkọta Google bụ ụzọ dị mma iji nyochaa usoro ịdị mma gị (ma ọ bụ enweghị ike ọ bụla). Jide n'aka na edere aha gị na Google Analytics. Gaa na ya ugboro ugboro ma hụ ihe na-eme ka okporo ụzọ gị gaa na saịtị. Iwu dị mfe ebe a bụ: ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, mee ya karịa na ihe ọ bụla anaghị arụ ọrụ, kwụsị ime ya. Dị Mfe, nri?
Tags: onye egwu muosearch engine njikarịchaA